‘रअ’का प्रमुखलाई आइसोलेसनमा पुर्याइदिए बाबुरामले ! – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/‘रअ’का प्रमुखलाई आइसोलेसनमा पुर्याइदिए बाबुरामले !
‘रअ’का प्रमुखलाई आइसोलेसनमा पुर्याइदिए बाबुरामले !
काठमाडौं । अघिल्लो साता नेपाली राजनीतिमा तरंग नै आयो । त्यो तरंग भारबाट आएको थियो । नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’का प्रमुख सामन्त गोयलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित, प्रचण्ड, विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवा लगायतका शक्तिशाली र शीर्ष भनिएकाहरु अधिकाशंलाई खुसुक्क, सुटुक्क र चुटुक्क भेटे र तुरुन्तै फर्किए । उनी के उदेश्यले आएका थिए र कुन रासायनिक विषादी छर्किएर गए भन्ने भित्री कुरा समय क्रमले खोल्दै जाला ।
तर यसबिचमा नेपालमा रहँदा ‘सामन्त गोयलले नेपालका विपक्षी नेता बाबुराम भट्टराईलाई पनि भेटेको रहस्य खुलेको छ । जुन कुरा बाबुरामले जनतालाई बताउन चाहेनन् । के कुरा भयो बाबुरामसँग भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुखको भन्ने कुरा त उनले सायदै बताउलान् । किनकी यहाँ यस्तै छ ।
यसो नगर्ने हो भने भोली – भोली आफ्नो पालो नआउला भन्ने डर हुन्छ नेपाललाई चलाइरहनेहरुलाई, अवसर पाए विकाश नगरी देश र जनतालाई हल्लाईरहनेहरुलाई । त्यही सूचिका एक बाबुरामले भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’का प्रमुख सामन्त गोयललाई भेटेको रहस्य भारतीय चर्चित संचारकर्मी तथा लेखक ज्योती मलहोत्राले बाहिर ल्याएकी छिन् ।
भारतीय सञ्चारमाध्यम द प्रिन्टकी रणनीतिक मामिला सम्पादक ज्योती मलहोत्राको आलेखमा ‘रअ’ प्रमुख गोयल नेपालमा रहँदा डा। भट्टराईलाई समेत भेटेको जानकारी उल्लेख छ। बाबुरामलाई नेपालमा भेटे लगत्तै कोरोना पुष्टि भएका कारण हाल ‘रअ’ प्रमुख गोयल भारत फर्केपछि संभवतः आइसोलेसनमा बसेको कुरा पनि उनले आफ्नो आलेखमा उल्लेख गरेकी छिन् ।
आयो यस्तो खबर : रक्षाबन्धनमा घरघरमा गएर धागो बाँध्न रोक
उपत्यकाका छिर्ने सबै नाका सिल गर्ने तयारी